သစ္စာအလင်း: ကျွန်မ တို့ ရဲ့ တရားပြဆရာ - ကိုအောင်ထွန်းဝင်း
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ တရားပြဆရာ - ကိုအောင်ထွန်းဝင်း
သစ်ရိပ် ၀ါးရိပ် တရားရိပ် တို့ဖြင့် အေး မြပါသော တရားစခန်းက နေ အိမ်ပြန်လာချိန် နေပူရှိန်ကပြင်းဆဲ….
အဇ္ဈတ္တကော ဗဟိဒ္ဓ ပါ.. ပူလောင်ခြင်းနဲ့ အေးမြခြင်း ကို နှိုင်းယှဉ်ခံစား နေ မိခဲ့ပြီ…။
လောက ရဲ့ မာယာ နဲ့ ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့ တကယ့်အရှိ အမှန် တရား - ပရမတ္ထသစ္စာ ကို ရှာဖွေဆင်ခြင် ခဲ့ တဲ့ ယောဂီ တစ်ဦး ဟာ သမုတိ သစ္စာ တော ထဲ မှာ မောရပြန် ပါအုံးမယ် …။
အရင်တုံး ကတော့ မောလို့ မောမှန်းပင်မသိခဲ့….။
ဘာတဲ့… သြော်…ဇရာ..ဇရာ..ဆိုပြီး ဇရာကို ဆင်ခြင် သံဝေဂ ဖြစ်သလိုလို နဲ့ ငယ်ငယ် ကရွှေထီးဆောင်း ခဲ့သော ပုံရိပ်များ ကို လူကြားထဲ ထုတ်ဖေါ်….။
နောက် တော့ ဆရာ..ဆရာ..ဆိုပြီးတော့ ကိုယ်က တစ်ချိန်သာသင်ရသောအတန်း…. ၁နှစ် မှာ ၅ရက်မျှသာသင်ရသောအတန်း…။
သူတပါး NGO ကငှားရမ်းလို့ ၃-၄- ရက်မျှသာသင်ရသောအတန်း တို့ ပြီးဆုံး ပါက သင်တန်းသားများ ဖြင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ကာ…. ဖေ့စ်ဘုတ် မှာ တင် ကာ..တင်ကာ… ဖြင့် ကျွန်မ ရဲ့ ဖောင်းပွပွ နှလုံးသား…..ကို ရိုက်ခတ် ပုတ်နှိုး မိချင်ခဲ့ပါပကော..။
သင်တန်းသား များရဲ့ ဘ၀ရှေ့ဆောင် ပုဂ္ဂိုလ် လိုလို…. အထင်ကြီး ခံလိုသောစိတ် …. သူတစ်ပါးက အားကျ စေလိုသော..မိမိ ကအရေး ပါကြောင်း ဖေါ်ပြလိုသော….စိတ်နှလုံး ကို အခု မှ ဆင်ခြင် မိသောအခါ အမှန်ပင်ရှက် နိုး မိရပါတယ်..။
ပိုလို့ ရှက်မိ တာကတော့ တရားစခန်း မှာ ဆရာပီသသော တရားပြဆရာတစ်ဦး ကို တွေ့ ကြုံ မိလိုက်တဲ့အချိန် မှာ ဖြစ်ပါတယ်…။ ဆရာ ကတော့ လှည်းကူးမြို့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဗောဓိ အေးငြိမ်း ရိပ်သာ မှ တရားပြဆရာ ကိုအောင်ထွန်းဝင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ ယော ဂီအများစုကတော့ ဆရာလေး လို့ မြတ်နိုးစွာ ခေါ်ကြပါတယ်..။
ထက်သန်ပြင်းပြ တဲ့စေတနာ အပြည့်အ၀ထားတာ ယောဂီများ နဲ့ အတူ ဦးဆောင်လမ်းပြပေးတာ …. ယောဂီ တဘက်စည်း ကာ မျက်စိ ပိတ်ထား၍ တရားအားထုတ် နေတာမို့ မမြင် ရသော်လည်း ကျွန်မ တို့ ခံစားနားလည် ရပါတယ်..။ ဆရာ သင်ပြ သော တရား..ဆရာလမ်းညွှန်သော လမ်းသည်ကျွန်မတို့အတွက် ဘ၀ရတနာများ ပါ..။
အားလျော့ချိန် မှာ အားတက်စေခဲ့တယ်..။
ညည်းငွေ့ ချိန် မှာ ရွှင်လန်းစေခဲ့တယ်…။
ဘ၀ အဓိပ္ပါယ် နဲ့ အတူ ကြိုးစားချင် စိတ်ကို ပုံဖေါ်ပေးခဲ့ပါတယ်..။
ခက်ခဲ နက်နဲ လှတဲ့ မောင်းထောင်မြေဇင်းတောရ ဆရာ တော်ဘုရား ကြီး ရဲ့ တရား နည်း တွေ... ဆရာတော် အရှင်ကေလာသ ရဲ့ ဟောကြား မှု တွေ ဟာအဘိုးမဖြတ်နိုင်သလို... ဆရာလေး ရဲ့ ရှင်းလင်း ချက်တွေကြောင့် လည်း အသိဥာဏ် ပွင့်လင်း ခဲ့ ရပါတယ်..။
ရိပ်သာ အစွန် ..ယောဂီ တိုက်ဆောင်များ ရဲ့ အလွန် က ၀ါးတဲလေး ဟာ ဆရာ သီတင်းသုံးနေတာ ပါလို့ သိလိုက်ရချိန် မှာ သူတော်ကောင်း တို့ ရဲ့ သန္တိသစ္စာ ကို တစ်ပိုင်းတစ်စ မြင်ရပါ တော့ တယ်..။
*အရှင်ဘုရား တို့ကို တပည့်တော် လျှောက်ထားချင်ပါတယ်* ဟု နှိမ့်ချရိုကျိုးသော အသုံးအနှုန်းကို ကျွန်မ ကြား ရတဲ့အခါ ကျွန်မ တို့ ဆရာ-ဆရာမ လောက ၉၉% တွင်တွေ့ ရတတ်သော မာန တရားကို ထို တရားပြဆရာ သည် အဘယ် မည် သော တရားဖြင့် ခွာချ သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါသနည်း လို့ သိလို လှပါတယ်..။
* ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ဟာ သိက္ခာရှိပြီး တကယ်လေးစားလောက်တဲ့ သူတော်ကောင်း နှလုံးသားရှိသူ ဟုတ်မဟုတ် အကဲဖြတ်ချင် ရင် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် ဟာ သူ့လောက် ကံ မကောင်း တဲ့သူတွေအပေါ် ဘယ် လို ပုံစံ နဲ့ ဆက်ဆံ သလဲ ဆိုတဲ့ အချက် နဲ့ အကဲခတ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ် တဲ့ * (စာ=၈၁ တော်ဝင်နွယ် -သူတော်ကောင်းတို့ နှလုံးသား )
ကျွန်မဟာ ဆရာလေး ရဲ့ အနာကြီးရောဂါသည်များ ကို တရားချီးမြှောက် ပြီး သူတို့ နဲ့ တူတူ နွေးထွေး ရင်းနှီးစွာ ရိုက်ထား တဲ့ ဓာတ်ပုံလေးကို မြင်လိုက်ရချိန် မှာ လည်း ပိုလို့ တုန် လှုပ်မိကာ ဆရာတော်ဝင်နွယ် ရေးသားတဲ့ သူတော်ကောင်းတို့နှလုံးသားစာအုပ်ထဲ မှ အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်ကြီးကို သွားသတိရမိပါတယ်..။
အရှင်မဟာ ကဿပ မထေရ်ဟာ အမျိုးမြတ်သူ ၊ ပညာတတ်သူ ၊ ဥစ္စာပေါသူ ၊ ရုပ်ချောသူ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ရ တတိယ မဟာ သာဝက ရဟန္တာ အရှင် မြတ် ကြီး ဖြစ်ပေမဲ့ မိမိလောက်ကံမကောင်း တဲ့ ဆင်း ရဲသားကျောမွဲ လူတန်းစား ကို သနားစောင့်ရှောက်ချီးမြှောက်တော်မူ ပါတယ်..။ နိမ့်ပါး ရှာသူ တို့ ကိုအားပေးစောင့်ရှောက် တတ်တဲ့လေးစား စရာ မထေရ် တစ်ပါး ဖြစ်ပါတယ်..။
တစ်နေ့ အဲဒီဆင်းရဲသားရပ်ကွက် ကို ဆွမ်းခံကြွ ချိန် မှာတော့ သပိတ်ထဲကို သွေး ပြည်တွေ လိမ်းနေတဲ့ လက်ချောင်းပြတ် တစ်ခု ဟာ တစ်ဇွန်းစာသော ဆွမ်း နဲ့ အတူ ရောပါလာ ပါသတဲ့..။ အရှင် မဟာ ကဿပ မထေရ်ဟာ ရွံရှာ စက်ဆုပ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိပဲ လက်ချောင်းကို အသာဖယ် ပြီး ဘုဉ်းပေးတော်မူပါသတဲ့..။
ကာယ ဂတာ သတိ နဲ့ အတူ ကရုဏာ တရားထုံမွှမ်း ထားတဲ့ နှလုံးသားဟာ အံ့ချီးလေးမြတ်ဘို့ ကောင်း ပါတယ်..။
လောက မှာ အပယ် ခံ ဘ၀ကို ရောက်နေကြရတဲ့ နိမ့်ကျသူ များစွာ ရှိပါတယ်..။ အရှင်မဟာ ကဿပ မထေရ် တို့ လို သူတော်ကောင်း နှလုံးသား ကို ပုံတူ ကူး မဲ့ သူများ လောက ထဲရှိနေခြင်း ဟာ…. လေးစားချီးကျူး ဖွယ် ရာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကံ ကလည်းမကောင်း ၊ အကြောင်း ကလည်းမလှ…. အပယ် ခံ ဘ၀များ ဟာ အနာကြီးရောဂါသည်များ နှင့် AIDS ရောဂါ ဝေဒနာသည်များ ပါ..။
လူတော ထဲ လည်းမတိုးဝံ့..အသက်မဆုံး ခင် မှာ ဘ၀ ဆုံး ရရှာသူများ စွာ… ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင် ရာ ကော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပါအားကိုးရာမဲ့ ကြရှာတော့တာ..။
ဆရာလေး ရဲ့ အတွေ့ အကြုံ အရဆိုလျှင် တစ်ခါက စာသင်စာချဘ၀ ဖြင့် ဘုန်းကြီးနေတဲ့ တပည့်များ စွာ ကို မွေးထုတ်ခဲ့သော ဆရာတော် တစ်ပါး ဟာ လူတောမတိုးဝံ့တဲ ရောဂါ နဲ့ လူဝတ်လဲကာ ဆင်းရဲ ချို့ငဲ့ ညှိုးငယ် စွာ နေရပါသတဲ့..။
ကျွန်မ တို့ ရဲ့ တရားပြဆရာ လေး ကိုအောင်ထွန်းဝင်း က ဒီလို အနိမ့်ကျဆုံး လူတန်းစားများအတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံး ဓမ္မ လက်ဆောင် ကိုပေး ပြီး ကြီးမြတ်သော ပါရမီ ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာ…. ဖြစ်ပါတယ်..။
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ် မှB.A ( Buddhism ) ရရှိခဲ့သော ဆရာလေး သည် သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ Colombo , Buddhist Pali University မှာ M.A တက်ရောက် နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်..။
မတ်လ ကမှ သီရီလင်္ကာ သို့ ထွက်ခွာ ခဲ့သော်လည်း သင်္ကြန် စခန်းဝင်ယောဂီများ အတွက် စေတနာ ပြည့်ဝစွာ ဖြင့် တရားပြသရန်မြန်မာ ပြည်သို့ ပြန်လာပေးခဲ့သလို ..မပြန်ခင် မှာ မြောက်ဒဂုံ ရှိ ဝေဒနာသည်များ မတ္တရာ ရှိ အနာကြီး ရောဂါ ရှင်များ ထံသို့ သွားရောက်ရန်ဦးတည် လျက်ရှိ နေပါပြီ..။
အားနည်းသူတို့ ရဲ့ အားကိုးခြင်း တည်ရာ…..ခိုကိုး ရာ သဖွယ် ကမ်းလင့်သော လက်များ ၊ ကယ် တင်သော လက်များ သည် သန်မာ တောင့်တင်းသော ကြံ့ခိုင်မှု ရှိသထက်ရှိစေ ဘို့ ကျွန်မတို့ အားပေးသင့် လှသည် မဟုတ်ပါလော…။
မယောင်ရာ ဆီလူး ၍
လေးနက် စွာ အဓိပ္ပါယ် ရှိကြပါစေသား ..။
၁၁.၄.၂၀၁၆ မှ ၂၀.၄.၂၀၁၆ ထိ တရား အားထုတ် ခွင့်ပြုခဲ့ပါသော
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗောဓိအေးငြိမ်းရိပ်သာသို့ ထာဝစဉ် ဦးညွှတ်လျက်...။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 12:34 PM
ခေါင်းစဉ် ကျွန်မ တို့ ချစ်သော ဆရာဆရာမများ